Diyaarad Dagaal oo Yahuudda ugasoo Dhacday Duleedka Magaalada Gaza Ee Dhulka Filasdiin.
Thursday October 06, 2016 - 16:03:35 in Wararka by Super Admin
Diyaarad nooca dagaalka ah oo Yahuuddu ay leeyihiin ayaa ku bur burtay Garoon Meliteri oo kuyaalla Mandiqadda Al-Naqab xilli ay kasoo noqotay duqeymo ay ku qaadday Jiidda Gaza.
Mid ka mid ah duuliyey-yaasha diyaaradaha dagaalka ee Yahuudda ayaa dhintay, mid kalena dhaawac ayaa soo gaaray galabnimadii Arbacada ee shalay, kadib markii ay bur burtay diyaarad nooceedu yahay F16 xilli ay dooneysay inay caga dhigato saldhig Meliteri oo kuyaalla Mandiqadda Al-Naqab ee dhacda meel ku dhow soohdinta Jiidda Gaza.
Warsidaha lagu magacaabo Yadicot Ahranot ayaa daabacay inaan weli la helin faah faahin rasmi ah oo ku saabsan sababaha keenay bur burka diyaaradda, balse wararka qaarkood ayaa sheegaya in dab xooggan uu ka kacay gudaha diyaaradda ka hor inta aysan bur burin.
Diyaaraddu waxay bur burtay waxyar kadib markii ay kasoo noqotay duqeyn ay ku qaadday deegaanno ka tirsan Jiidda Gaza, waxaana halka ay kusoo dhacday diyaaradda gaaray Ciidamo badan oo ka tiran Meliteriga iyo Booliiska Yahuudda, kuwaas oo goobta isku geedaamay.
Bayaan rasmi ah oo kasoo baxay Meliteriga Yahuudda ayaa waxay ku sheegeen in diyaaraddu ay bur burtay markii ay ku guul dareysatay inay caga dhigato, iyadoona mid ka mid ah duuliye-yaasha uu ka booday diyaarada, halka caawiyihiisana uu ku dhintay Shilkaasi.
Shalay gelinkii dambe ayay aheyd markii diyaaradda dagaalka ee Ciidamada Yahuudda ay ku bur burtay Mandiqadda Al-Naqab ee ku dhow Jiidda Gaza, iyadoona goob joogayaashu ay sheegeen in markii ay qaraxa maqleen inay u qaateen in goobta uu kusoo dhacay gantaal ay soo tuureen Kooxaha Muqaawamada Filastiiniyiinta, hase yeeshee markii dambe ayaa la ogaaday in diyaarad nooca dagaalka ah ay ku bur burtay garoonka Meliteriga ee Raamoon.
Dhinaca kalena Ciidamada badda ee Maamulka gumeysiga ee Sahyuuniyadda ayaa shalay gelinkii dambe xoog kula wareegay doonta lagu magacaabo Zeytuuna ee Shixnadda gar-gaarka u sidday dadka ku go’doonsan ee magaalada Qaza, iyadoona toboneeyo haween ah oo doontaas la socday ay doonayeen inay jebiyaan go’doonka saaran magaladaasi, hase yeeshee Ciidamada ee Sahyuuniyadda ayaa is hortaagay.
Ciidamada Yahuudda ayaa doonta waxay usoo jiideen dhanka dekedda magaalada Usuduud, iyadoona haweenkii doonta la socday saakay aroortii loo soo daabulay gedida diyuuradaha ee Ben Goriyon ee magaalada Talaabiib, halkaas oo laga saari doono diyaarado dib ugu celiya dalalkii ay ka yimaadeen.